Rambo4ရုပ်ရှင်ကားအား စင်္ကာပူရှိမျိုးချစ်မြန်မာများအားလုံး အတူကြည့်ရှုကြစို့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
January 29, 2008, 1:28 am
ညီမ ။ သတ့်ုတခု ပြင်လိုက်ပါ ။
ပမာဏ နေရာမှာ ပဏာမ လို့ ပြင်ပါ ။ ရှေးဦးစွာ လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Comment by OWAY AUNG January 29, 2008 @ 3:04 am
သတ်ပုံ လို့ပြင်ဖတ်ပါ။
သတ့်ုံ မှာလို့ ပြင်ခိုင်းတာ သတ့်ုံ ကထပ်ပြီး သတ့်ု မှားနေပြန်တယယ် ။ရယ်ရတယ်နော် ။
Comment by OWAY AUNG January 29, 2008 @ 3:08 am
Comment by OWAY AUNG January 29, 2008 @ 3:09 am
လူပေါင်း ၅သိန်းကျော်သေဆုံးတဲ့ ဆူနာမိကြီးဟာ အမေရိကန် စစ်ရာဇတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်ကြောင်း ထောက်အထားတွေနဲ့ ရေးထားပါတယ်။ အရေမရ မဖတ်မရကို စိတ်ကုန်ရင် လာခဲ့ပါခင်ဗျာ http://lightofmyanmar.blogspot.com/
Comment by Anonymous January 29, 2008 @ 4:47 am
Comment by သတိသတိသတိ January 29, 2008 @ 5:04 am
I do go and watch this weekend!!!
Comment by YeKyawAungMDY January 29, 2008 @ 5:08 am
ကိုယ့်အဖေ အရက်သောက်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ရမ်းတာ လူမသိအောင် ဖုံးဖုံးဖိဖိလုပ်၊ အဖေ့ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် တရားချ၊ တရားပြမဲ့ဟာကို အရပ်က ၀ိုင်းဆဲ၊ ၀ိုင်းရိုက်တာကို လက်ခုပ်တီးတယ်။
Comment by Law Shay January 29, 2008 @ 11:39 am
နအဖ သောက်၇ူး တွေက ၇န်ဘို လို စကားများများ မပြောဘဲ လက်တွေ. င်္ဆုးမ တဲ.သူမျိူး ဘဲ ကြောက်တာ မို. တို.မြန် မာတွေ ထဲက စူစိုက်င်္ဘုမာ ဖြစ်ဖြစ် တကယ် သတ်၇ဲ တဲ.လူမျိူး များများ ၇ှိဘို. လိုအပ်တာ ကတော. အမှန်ပါဘဲ။။
Comment by Win Htet January 29, 2008 @ 1:44 pm
အရက်သောက်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ရမ်းနေတာ ကျနော့်အဖေတော့ မဟုတ်ပါ။ ခင်ဗျားအဖေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ကိုလောရှည်။
Comment by Anonymous January 29, 2008 @ 4:32 pm
law shay , Fuck you .
Comment by Anonymous January 31, 2008 @ 12:13 am
U law shay…,..
Mother fucker (so sorry to other ppl)
fuck you…suck your father (who drunk and sleep on the street) disk…
lee bae ma aie lowww yay….
Comment by thura January 31, 2008 @ 4:01 pm
အဖေမဟုတ်ဘူး..ပထွေးဟေး .. အိမ်ပေါ်တတ်ပြီးရှိသမျှထိုင်ဖြုန်းနေတာ..အရပ်ကသိကုန်လို့ ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတာ. ..
Comment by chitthulay February 3, 2008 @ 4:28 am
မပြောချင်ပေမယ့်လဲ ပြောရအုံးမယ် ဇော်မျိုးရဲ့ တုံးချက်ကတော့ သူ့အဘတွေအတိုင်းပဲ၊ Sunamiက Bushကြောင့်တဲ့…. တော်တော့်ကိုတုံးတဲ့ကောင်..တုံးယုံတင်မဟုတ်ဘူး ချိုင့်တောင်နေသေးတယ်…
Comment by ဗေလုဝ February 4, 2008 @ 7:21 am